ခင်လွန်း - '' ကြောင်တောင်တောင် ..လူများ၊ ကြောင်များ .. ငှက်များ .. မိုးတိမ်များ '' - MoeMaKa Media
Home / Essays / Khin Lunn / Literature / ခင်လွန်း - '' ကြောင်တောင်တောင် ..လူများ၊ ကြောင်များ .. ငှက်များ .. မိုးတိမ်များ ''
ခင်လွန်း - '' ကြောင်တောင်တောင် ..လူများ၊ ကြောင်များ .. ငှက်များ .. မိုးတိမ်များ ''
ခင်လွန်း - '' ကြောင်တောင်တောင် လူများ ကြောင်များ ငှက်များ မိုးတိမ်များ ''
(လက်တန်းစာရိုက်ထားလို့သတ်ပုံအကျအပေါက်၊ ဝါကျအထားအသို၊ အရေးအသား အားလုံးဖုထစ် ငေါတောကြီးဖြစ်နေရင် ခွင့်လွှတ်)
ပုံတွေက ရဲဘော်မရဲ့ ဇာတ်ကောင်လေး ၂ ကောင်ပါပဲ။
မြင်ကွင်းကတော့ ထပ်ပြီးရင်းထပ်နေမယ့် မြင်ကွင်းပါပဲ။ အဖော်မပါတဲ့ စာပေါက်လေးတကောင်။ အိမ်ရှေ့မှန်ပြတင်းဝနားက ဆောင်းခါးခါးထဲ မပွင့်ရဲတော့တဲ့ နှင်းဆီဖြူပင်ပေါ်နားလို့။
ဒါကို သူဘယ်နှပုံရိုက်ရလဲကိုယ်မသိ။ ကိုယ်က သူ့ကင်မရာ အသာချထားရင် ခဏယူယူပြီး ပုံလေးတွေဖွင့်ကြည့်။ ကြိုက်ရင် မ, ထား။
ပြီးတော့ ကိုယ့်ဖေ့ဘုတ်မှာ ခပ်တည်တည်ယူတင်။ ဒါပေမဲ့ လိပ်ပြာကမလုံတော့ ကိုယ်ချင်းကိုယ်ချင်းဆိုသည့်တိုင် သူ့ကို ခရက်ဒစ်မပေးဘဲမနေတတ်။
စာပေလောကထဲပျော်မွေ့လာသူဆိုတော့ ဘာလေးဖြစ်ဖြစ် သူတပါးအားထုတ်ဖန်တီးထားတဲ့ဟာ ပိုင်ရှင်ကိုအသိမပေးဘဲမယူရဲ။ ပိုင်ရှင်လုံးဝမသိရင် ကိုယ်ဘယ်နားကရပါတယ် ယူပါတယ် ခရက်ဒစ်လေးပေးခဲ့တာချည်းပါပဲ။ (မတော်မေ့မက်သွားလို့ မ,ထားခံရတဲ့လူများရှိရင် အားမနာနဲ့လှမ်းသာပြော၊ ကိစ္စများမြောင် လူတို့ဘောင်ဆိုတဲ့အတိုင်း သတိတွေလစ်ဟင်းရတဲ့အခြေအနေတွေက ကြုံတတ်တာကိုးနော်)
ထားပါ။ ရဲဘော်မရဲ့ဒီ ဇာတ်ကောင်လေး ၂ ကောင်ဟာ ပင်တိုင်လိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။
ကိုယ်တွေနေရတဲ့အိမ်လေးက (အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အယ်လ်(L) ပုံသဏ္ဍန်) တဖက်ပိတ်လမ်းရဲ့ဒေါင့်စွန်းအကျဆုံးထိပ်၊ တနည်း တောစီးဖိနစ်တရံနဲ့ခိုင်းပြောရရင် အဲဒီ့ (လည္)လက်ရှည်ဖိနပ်ကြီးရဲ့ခြေသန်းနေရာမှာဆိုတော့ ထောင့်ပိတ်မိနေတဲ့နေရာမျိုးပါ။ ပြောရရင် ကိုယ်တွေအိမ်လေးက နည်းနည်းတော့လည်း ထူးပါတယ်။ အိမ်တအိမ်ရဲ့အိမ်ရှေ့ဘက်မျက်နှာစာခြံစည်းရိုးမှာ လူဖြစ်စေ ကားဖြစ်စေ ဘာဆိုဘာမှ ဝင်လို့ထွက်လို့မရ အောင် လူတရပ်စာမကမြင့်တဲ့ခြံစည်းရိုးကြီး အပြည့်ကာထားတာပါ။ ဆိုကြပါစို့ ...မိတ်ဆွေကကိုယ်တွေအိမ်လာလည်မယ်ဆိုပါစို့။ အိမ်နောက်ဖေးတပေါက်သည်သာ ဝင်စို့ကွဲ့ ထွက်စို့ကွဲ့ လုပ်ရတာပါ။
မဖြစ်မနေ အိမ်ရှေ့ပေါက်က ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့ ခေါင်းရင်းဘက်ကိုကွေ့ပတ်လျှောက်ရတော့တာပေါ့။
အဲဒီလိုချောင်ကျကျတဖက်ပိတ်နေလို့လား၊ ဒါမှမဟုတ် ချယ်ရီပင်တွေ... မြန်မာပြည်က သင်္ဘောမယ်ဇလီပင်နဲ့တူတဲ့သစ်ရိပ်ဖားဖားတွေ၊ လူ့တရပ်လောက်မရှိတ်ရှိတတ် ပန်းရုံပန်းခြုံတွေလေးတွေမျာလွန်းလို့လား ... အကြောင်း ၂ ခုလုံးကြောင့်ပဲလားမသိ၊ အရောင်အသွေးအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနဲ့ငှက်ကလေးတွေ နားခို ပျော် မြူးတတ်ကြပါတယ်။
အိမ်ခေါင်းရင်းက ပုစွန်ဆီသွေးရောင်ပန်းတွေပွင့်တဲ့ ပိန်းပိတ်နေတဲ့ပန်းရုံကြီးမှာတော့ အသံချိုချိုနဲ့သီချင်းတွေတကြော်ကြော် အော်ဆိုတတ်တဲ့ မြန်မာပြည်က သာလိကာလားထင်မှားရတဲ့ငှက်ကလေးတွေ အသိုက်တည် နေထိုင်ကြပုံရပါတယ်။ မနက်အာရုဏ်ကျင်းစ ဝေလီဝေလင်းများဆို အိပ်ရာခေါင်းရင်းဘက်ကနေ သူတို့လေးတွေသီချင်းအပြိုင်ဆိုနေသံကိုကြားရတာလောက် ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။
စာငှက်လေးတွေကျတော့ သီချင်းဆိုမကောင်းလှပေမယ့် မနက်မနက် အလုပ်သွားခါနီး မိသားစုတွေ၊ သူ ငယ်ချင်းတွေ၊ တစုနဲ့တစု တကောင်နဲ့တကောင်၊ ဇနီးနဲ့လင်သား။ သားသမီးနဲ့မိဘ စကားတွေ ကျွက်ကျွက်ညံအောင်ပြောကြတာများ ကိုယ်တွေပါပျော်ရတယ်။ သူတို့မိသားစုတွေ ဆွေတွေမျိုးတွေ၊ မောင်နှမတွေ၊ သူ ငယ်ချင်းတွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် ရဲဘော်ရဲဘက်တွေရဲ့ ဘဝပုံရိပ်ပေါ့။
ဒီတော့လဲ ဒီငှက်လေးတွေ ကိုယ်တွေနား နေကြထိုင်ကြ အိုးအိမ်ဖွဲ့ကြ ဆောက်ကြတာကို မြဲမြံပျော်ရွှင်စေလိုတဲ့စိတ်နဲ့ ကိုယ်တို့မောင်နှံဟာ သူတို့စားဖို့အစာတွေ ဝယ်ခြမ်းကျွေးရပါတယ်။ ငှက်စာရယ်လို့တော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။
ငှက်စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ ငှက်စာမကျွေးချင်တာကြောင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါလေးစကားစပ်တုန်းပြောရရင် ကိုယ်တွေက ငှက်လေးတွေစားဖို့ဆိုပြီး ငှက်စာဘယ်မှာဝယ်ရလဲစုံစမ်းပြီးဝယ်ကြတာပေါ့။ စပါးနှံလေးတွေနဲ့တူတဲ့နှံစားသီးတမျိုးပါပဲ။ စပါးတော့မဟုတ်ဘူး။ အဲဒါကိုငှက်လေးတွေမြင်သာအောင်ထားပြီးကျွေးတော့ မစားကြပါဘူး။ စောင်းငှဲ့လို့တောင်မကြည့်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ သူများတွေကိုလေ့လာရတာပေ့ါ။
ဒီတော့မှ အိမ်ရှေ့မှာနေသွားတဲ့ ဂျွန်ဆိုတဲ့အဘိုးကြီး သူ့ပေါင်မုန့်ဘေးသားလေးတွေ မြက်ခင်းစိမ်းပေါ်လှမ်း လှမ်းပစ်ပေးနေတာ သတိထားမိသွားပြီး ကိုယ်တွေလဲ ပေါင်မုန့်ဝယ်ကျွေးရတော့တာပေါ့။
ဒီလိုနဲ့ကိုယ်တို့အိမ်ရှေ့ကွက်လပ်ပေါ်က မြက်ခင်းစိမ်းလေးဟာ သူတို့ရဲ့စားကျက်မြေလိုဖြစ်လာပြီး တနေ့တနေ့ အုံ့နဲ့ကျင်းနဲ့ကိုလာစားတာ ပျော်စရာကြည်နူးစရာပါပဲ။
တခါသားမှာတော့ ကိစ္စများမြောင်နေတာနဲ့ ငှက်စာအတွက် ပေါင်မုန့်ဝယ်ဖို့သတိမေ့လျော့သွားတဲ့နေ့ဖြစ်ရပါလေရော။ မနက်မိုးလင်းတော့ ငှက်လေးတွေက သူတို့နားနေကြ အကိုင်းအဖျားတွေမှာ၊ ခြံစည်းရိုးပေါ်မှာ အဝတ်တန်းကြိုးမှာ ... အုံနဲ့ကျင်းနဲ့ ထုနဲ့ထည်နဲ့ ခေါင်းလေးတွေတခါခါ လည်ဆံလေးတွေတဆန့်ဆန့်နဲ့ ခါတိုင်းနေ့တွေလို စောင့်နေကြရောလေ။
အဘိုးကြီးအဘွားကြီးနှစ်ယောက်သား ဘာလုပ်ရတော့မှန်းမသိဘူး။ ငှက်လေးတွေကလဲ မနက်စာလေး ဒီကဆွဲပြီးမှ အလုပ်သွားကြ ကျောင်းသွားကြ၊ လယ်ထဲဆင်းကြ လုပ်ကြတာဆိုတော့ ခက်ပြီပေါ့။ ဒီမှာတင် ရဲဘော်မက မထူးဘူးဟာ ထမင်းကျန်တွေ ပက်ကျွေးကြည့်မယ်ပြောပြီး မြက်ခင်းစိမ်းပေါ် ဖွေးခနဲဖြစ်အောင် ထမင်းကြမ်းတွေပစ်တင်လိုက်တယ်။
ပထမတော့ ငှက်ကလေးတွေဟာ ဘာမှန်းမသိလို့လားမသိ၊ ကြောင်တောင်ကြီးကြည့်လို့ပေါ့။ နောက်တော့ နည်းနည်းဉာဏ်ထက်တဲ့ငှက်လေးတကောင်က မြက်ခင်းစိမ်းပေါ်ဆင်းလာတယ်။ သူတွေးမှာပေါ့။ အိမ်ရှင်လူမိန်းမကြီ ဟာ ဒီလိုအချိန်တိုင်း မြက်ခင်းပေါ်ကို ငါတို့စားဖို့အစာတွေ ပေးနေကြပဲ။ ဒီနေ့လဲ ဒါဟာ ငါတို့စားဖို့အတွက် အသစ်အဆန်းတမျိုးမျိုး ကျွေးတာဖြစ်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒို့ကောင်တွေက အသစ် အဆန်းမြင်ရင် ချက် ချင်းလက် မခံရဲတာရယ်၊ စူးစမ်းရဲတဲ့သတ္တိနဲတာရယ်နဲ့ မနက်စာငတ်ကုန်တော့မှာပဲ။ ငါ စွန့်စားကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးအခေါ်နဲ့ ဆင်းလာပုံပါပဲ။ ပြီးတော့ သူ့နှုတ်သီးလေးနဲ့ စမ်းထိုးဆိတ်ကြည့်တယ်။ မဆိုးဘူးထင်တော့ လည်မျိုထဲမျိုချကြည့်ပေါ့။ ဝမ်းထဲရောက်သွားတော့ ခဏစောင့်ကြည့်တယ်။ ဝမ်းပူမလား၊ ရင်ပူ မလား။ မီးတောက်မျိုချမိသလိုဖြစ်ပြီး ဆန့်ငင်ဆန့်ငင်နဲ့ တုံးခနဲလဲသေသွားမလား။
ခဏနေတော့ သူဘာမှမဖြစ်လေတော့ သူ့အဖော်တွေကိုညာသံလေးတသံ ပေးလိုက်တယ်။ ပြည်သူငှက်ထုကြီးချီတက်လာကြပေတော့။ ဤအရာကား ကျွန်ုပ်တို့ နယူးဇီလန်က ငှက်ကမ္ဘာအတွက် ထူးမြတ်ကောင်း မွန်သော အာဟာရတသွယ် အသစ်စက်စက် ဘရန်းနယူးဖြစ်ပေတော့သတည်းလို့ အသံပေးလိုက်တာ နေမှာပေါ့။
သက်စွန့်မွှေးဖျား အာဇာနည်ငှက်ငယ်လေးကြောင့် အဲဒီ့နေ့ကစ နောင်အခါမှာ ကိုယ်တွေဟာ ပေါင်မုန့်တလှည့်၊ တမင်သပ်သပ်ချက်ကျွေးတဲ့ထမင်းအိုးက တလှည့်နဲ့ ငှက်ထုနဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စွာကြည်နူးစွာနေကြတယ်ပေါ့ဗျာ။
အဲ ...ဒါပေမဲ့ အဲဒီလိုအခြေအနေတွေဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ကစပြီး ပျက်သုဉ်းသွားသလိုဖြစ်တော့တာပါပဲ။
အဲဒါကတော့ ငှက်ကလေးတွေရဲ့ရန်သူဟာ ကိုယ်တွေရဲ့အိမ်နီးချင်းအဖြစ် စတင်ရောက်ရှိလာသူနဲ့အတူပါလာတဲ့ အခုဒီမှာတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲက အမွှေးထူထူ ကြောင်မဲမဲကြီးတကောင်ကြောင့်ပါပဲ။
တကယ်က ကိုယ်တို့အဘိုးကြီး အဘွားကြီးမောင်နှံဟာ ဒီနိုင်ငံမှာ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်မွေးသူတွေလိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေရယ်၊ အဲဒီ့အကောင်ပလောင်လေးတွေအတွက် ကရိကထများရတာတွေရယ်၊ ပြီးတော့ ဖြစ်နိုင်သမျှ သက်ရှိသက်မဲ့တစုံတရာအပေါ်သံယောဇဉ်အပိုမထားလိုတဲ့အတွက်ရယ်နဲ့ ဘာအကောင်ပလောင်ကိုမှမွေးမြူလိုစိတ်ရှိတာတော့မဟုတ်ပါပဲ အိမ်နီးချင်းအသီးသီး အသကအသကတို့ရဲ့ကြောင်လေးတွေအိမ် လည်လာတိုင်း သူတို့ကို အစာလေးတွေချကျွေးဖို့ တမင်ပဲအဆင်သင့် ဝယ်ဝယ်ပေးထားတတ်ပါတယ်။
ကိုယ့်စိတ်နှလုံးသားပျော်မွေ့ရာ ဘဝဝန်းကျင်ကနေ နှစ်ပေါင်းတာရှည်ခွဲခွာနေကြရသူတွေလဲဖြစ်၊ နှစ်ကိုယ်ရည်ဘဝလဲဖြစ်ပြန်တော့ ကိုယ့်ဆီသက်ရှိသတ္တဝါလေးတကောင်ကောင်လာလည်တယ်ဆိုရင်ပဲ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ဖြစ်ရ၊ အသစ်အဆန်းတခုခုအဖြစ်လဲ သဘောထားရတော့ သူတို့လေးတွေ ခဏခဏလာလည်ချင်အောင် ဧည့်ဝတ်ကျေရတဲ့သဘောလဲ ပါတာပေါ့လေ။
ဧည့်သည်ကြောင်လေးတွေက အရွယ်အစား၊ အမျိုးအနွယ်၊ အရောင်အဆင်းအမျိုးမျိုးပဲ။ တချို့လဲ မြန်မာပြည်မှာမြင်နေရတတ်တဲ့ကြောင်မျိုးပါပဲ။ များသောအားဖြင့်တော့ မြန်မာပြည်မှာအတွေ့နည်းတဲ့ကြောင်မျိုးတွေက များပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဘယ်လိုကံ ဖန်သည်မသိပေါ့။ ကိုယ်တွေအိမ်ထဲ ဝင်လည်၊ စားသောက်၊ ရံဖန်ရံခါ ညတောင်အိပ်သွားတတ်တဲ့ကြောင်လေးတွေကတော့ မြန်မာကြောင်နဲ့ပဲတူကြတာ များပါတယ်။ ဒီအရာတခုကိုတော့ ကိုယ်တွေစိတ်ကျေနပ်အောင် ဘယ်အရာက ဖန်ပေးထားလဲမဆိုတတ်ပါဘူး။
အဲဒီ့လိုအိမ်လည်လာသည်ဖြစ်စေ မလာသည်ဖြစ်စေ ကြောင်တွေဟာ စောစောကလူသစ်နဲ့အတူပါလာတဲ့ကြောင်မဲမဲအမွှေးထူထူကောင်လို ကိုယ်တွေကို တေးဆိုပြတဲ့ငှက်လေးတွေအပေါ် ဘယ်သူမှ ဒုက္ခပေးလေ့မရှိတတ်ပါဘူး။။ အနိုင်မကျင့်ပါဘူး။ မုဆိုး မလိုက်ကြပါဘူး။ ငှက်လေးတွေကလဲ တေးတချိုချိုနေသလို ကြောင်လေးတွေကလဲ သူတို့အမြီးလေးတွေတထောင်ထောင်နဲ့ ဟိုအိမ်ဒီအိမ်ကူး သွားလာနေကြတာပါပဲ။ သူတို့ချင်းသူ အခန့်မသင့် ခူးခီးခဲနဲ့ ရန်စောင်မာန်ဖီဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ငှက်လေးတွေကိုတော့ ရမယ်မရှာဘူး။ မျက်စောင်းမထိုးဘူး။ အမှုမလုပ်ဘူး။ အေးဆေးနေကြတာချည်းပါပဲ။
ခုနက အိမ်နီးချင်းသစ်ရဲ့ကြောင်မဲကတော့ ပြဿာနာကောင်ပြောရမှာပဲ။
ဒါလဲ ပထမတော့ ကိုယ်ကသိတာမဟုတ်ဘူး။ ရဲဘော်မ,က တနေ့ "ဟေ့ဟေ့ အဘိုးကြီး အဘိုးကြီး ဟိုမှာကြည့်စမ်းကြည့်စမ်း...ဆိုပြီး အလန့်တကြားထအော်တော့ ကိုယ်လဲမျက်လုံးပြူးမျက်ဆံပြူးနဲ့ ဘာလဲပေါ့... စိတ်ထဲထိတ်ခနဲဖြစ်သွားပြီး ဖတ်နေတဲ့စာအုပ်ကိုပိတ် ဘေးဘီကိုအမောတကော ကြည့်ရတော့တာပေါ့။ ရဲဘော်မ,က အဲဒီလိုပြောပြီး သူ့ကိုယ်လုံးဝဝကြီးကိုပါ အိမ်ပေါက်ဝကိုလှစ်ခနဲမောင်းထွက်သွားလိုက်တာဟာ ဘယ်လိုအင်ဂျင်ပါဝါတွေထည့်ထားမှန်းမသိအောင်ကို အဟုန်ကြီးနဲ့ပါ။ ဘာများလဲ...ဘာများလဲပေါ့။ ရင်တထိတ်ထိတ်ပါပဲ။ ကျနော်ဟာ ထိုင်ခုံပေါ်ကစွေ့ခနဲထလိုက်ပြီး သူ့နောက်ကို လိုက်ရတာပေါ့။ သူ့မျက်နှာမှာက တစုံတခုကြောင့်ဖြစ်နေရတဲ့ဒေါသရိပ်ဟာ မီးအုံးထားသလိုနီရဲနေလျက်နဲ့ပေါ့။ သူနဲ့ကိုယ်နဲ့နှစ်ယောက်သားကြား ဒီမျက်နှာနဲ့ ဒီဟန်ဒီအပြုအမူမျိုး ကိုယ်တခါမှမမြင်ဖူးဘူး။
ဒါ ဘာလဲ... ဘာလဲ....? ဘာဖြစ်တာလဲ...?
သူက ဒေါသနဲ့အတူ လက်ထဲရရာစွဲပြီးထွက်လာတာဆိုတော့ ကိုယ့်ရဲ့လက်စွဲတော်ဒုတ်ကောက်ဟာ သူ့လက်ထဲမှာ ပြောင်းပြန်ကြီးကိုင်ရက်နဲ့ပေါ့။
လက်ကိုင်နေရာအကောက်နဲ့ နှက်မယ်ဆိုတဲ့သဘော။ ရဲဘော်မဟာ ရင်ဘတ်ကြီးဖားဖိုလိုနိမ့်မြင့်ဟောဟဲ လိုက်နေပြီး မျက်လုံးတွေလဲ လက်ထနေတော့ ကိုယ်က လေချိုလေးသွေးပြီး "ကိုင်း ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဟာ၊ ငါ့လဲ ပြောပါအုံးဟ " လို့ဆိုရတာပေါ့။ မျက်လုံးကိုလဲ သူကြည့်နေတဲ့ ချယ်ရီပင်ရဲ့သစ်ပင်ကိုင်းတွေပေါ် လိုက်ကြည့်ရင်းပေါ့။
"အိုး .." သဘောပေါက်လိုက်ပြီ။ ရဲဘော်မဆီက ဘာအဖြေမှမလိုတော့ဘူး။
ကြောင်မဲတူဟာ ချယ်ရီပင်ရဲ့သစ်ကိုင်းတခုပေါ်မှာ စာငှက်လေးတကောင်ကိုကိုက်ခဲထားလျက်က ဝင်းဝင်းတောက်နေတဲ့ သူ့မျက်လုံးအစုံနဲ့ ကိုယ်တွေကိုလဲ ပြန်ငုံ့ကြည့်နေတယ်။ ငှက်လေးဟာ မသေရှာသေးဘူး၊ အတောင်လေးတွေ တဖျတ်ဖျတ်ဖြစ်နေသေးတယ်။
(နောက်နေ့မှ ဆက်ရေးတော့မယ်။ ခု ညနက်ပြီ။)
ခင်လွန်း - '' ကြောင်တောင်တောင် ..လူများ၊ ကြောင်များ .. ငှက်များ .. မိုးတိမ်များ '' Reviewed by MoeMaKa on 3:47 AM Rating: 5